PHOTOS. Ka hor inta uusan guursan Katy Perry, Orlando Bloom wuxuu iibiyaa gurigiisa ugu sareysa - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Sawirada. Ka hor inta uusan guursan Katy Perry, Orlando Bloom wuxuu iibiyaa gurigiisa ugu sareysa
PHOTOS. Ka hor inta uusan guursan Katy Perry, Orlando Bloom wuxuu iibiyaa gurigiisa ugu sareysa
Yaa sheegaaya nolol cusub, ayuu leeyahay guri cusub Orlando Bloom. Dhowr toddobaad kadib weydiiyay Katy Perry guurka, actorka ayaa runtii go'aansaday inuu iibiyo gurigiisa oo ku yaala degmada Beverly Hills ee Los Angles. Laakiin si aad awood u yeelatid, waa inaad haysataa habka. Dhab ahaan, gurigan weyn wuxuu ku baxayaa qiimaha yar ee 9 million oo doolar, ku dhawaad 8 million euro ! Laakiin qiimahaas, nasiibku wuxuu nasiib u yeelanayaa inuu ku noolaado "Lacagta bilyaneeriga ah" kaas oo bixiya nolol aan la barxin karin oo ku yaal magaalada Malaa'igta iyo Badweynta Baasifigga.
Gurigan, oo qiyaasaya 374 m2, wuxuu ka kooban yahay afar qol jiif, afar musqulo, iyo barkad ballaaran iyo isbitaal. Dhammaan derbiyada quruxda badan ee dhalaalaya alaabta guriga, guriga ayaa ku habboon dadka jecel dhismayaasha quruxda badan. Lagu dhisay sanadaha 1960, Orlando Bloom wuxuu ku daray barkad cusub oo wuxuu xoojiyay xayiraad. Waxa kale oo uu doonayay meel qaali ah oo alwaax ah, saldhig lagu dhejiyo, nalalka LED, dabka ka danbeeya barkadda iyo dib u habeynta jikada si loogu furo qolka qadada.
Orlando Bloom iyo Katy Perry ayaa ku hawlan Maalinta Jacaylka. Tan iyo markaas, waxay u jihaadayaan jacayl qumman. Midba midka kale ha is dilo, iyagu ma aha ma ahan mid degdeg ah si ay u bilaabaan abaabulidda arooskooda. "Waxay marwalba ku mashquulayaan farxad iyo dabaaldegidooda, ayaa sharaxaad ka bixiyay ilo ku dhow labada lamaane Dadka. Wali ma aysan eegin faahfaahinta guurkooda. Waxay isku diyaarinayaan xaflad ballaaran oo loogu talagalay dhammaan saaxiibadood. Waxay noqon doontaa mid gaar ah. Waxay labadooduba ku faraxsan yihiin oo ay ku faraxsan yihiin in ay ku hawlan yihiin. "
Orlando Bloom ayaa hoygiisa Beverly Hills ka iibisay 8,9 Milyan Dollar
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/photos-avant-son-mariage-avec-katy-perry-orlando-bloom-vend-sa-sublime-villa-954859
REVERALED: Sidee Prince Harry nebcaaday la eegay hadalla'aan at 039 & #; inta lagu guda jiro mustaqbalkiisa ciidamada
Dadka: Cape Town waxay soo jiidaan qalbiga gabdhaha sababtoo ah waxay u egtahay jason-ka Jason Momoa